युवा उद्यमी गृहेन्द्र जसले सात प्रदेशमा सप्तरंग छरे
दर्शकलाई मनोरञ्जन, कलाकारलाई मञ्च, समाजलाई सन्देश
काठमाडौं- केही साताअघि देशका सातै प्रदेशका मुख्य शहर सांगीतिक माहोलमा झुमे ।
माघ १८ देखी फागनु २ गते (फ्रेबु्रअरी १ देखि १४)सम्म प्रदेशका मुख्य सहरमा सांगीतिक कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रमको नाम थियो –सप्तरंगः म्यूजिकल जर्नी २०१९ ।
माघ १८ गते प्रदेश एकको दमकबाट शुरुको कार्यक्रम फागुन २ गते प्रदेश चारको पोखरा पुगेर टुंगिएको थियो । त्यसबीचमा माघ २० गते प्रदेश दुईको जनकपुर, माघ २२ गते प्रदेश तीनको नारायणघाट, माघ २४ गते प्रदेश पाँचको बुटवल, माघ २६ गते प्रदेश छ को सुर्खेत, माघ २८ गते प्रदेश सातको धनगढीमा कार्यक्रम भएको थियो ।
गायक रामकृष्ण ढकालदेखि प्रमोद खरेलसम्म, पशुपति शर्मादेखि गायिका ईन्दिरा जोशीसम्म । त्यस्तै, चर्चित कमेडियन सन्दीप क्षेत्रीदेखि मोडल अञ्जली अधिकारी तथा तेक्वान्दोका राष्ट्रिय खेलाडी दीपक विष्टसम्मले उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाए र दर्शकलाई नचाए ।
हरेक शहरमा टीमको भव्य भव्य स्वागत गरियो । निशुल्क प्रवेश, आँखैअगाडि चर्चित कलाकार । कार्यक्रममा हजारौं दर्शक ओइरिए ।
कलाकारहरुले दर्शकलाई नचाउनेदेखि पेट मिचिमिची हँसाए । कार्यक्रममा नाँचगान मात्र भएन । एक–अर्को प्रदेशका स्थानीय कला, संस्कृतिको उत्थान र पर्यटन प्रवर्द्धनका कुराहरू पनि भए । सातै प्रादेशिक विशेषतालाई संगीतको माध्यमबाट एकै सूत्रमा बाँध्ने काम गरियो । पर्यटकीय तथा धार्मिक गन्तव्यहरू पहिल्याइयो । स्थानीय कलाकर्मीहरूलाई मञ्चमा उभ्याइयो । कलाकारले नचाए, हँसाए, दुर्लभ किसिमको कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
यसको पछाडि थिए, गृहेन्द्र घिमिरे (वर्ष ३४) ।
गृहेन्द्र पर्दापछाडिका यस्ता व्यक्ति हुन् जसले केही वर्षयता नेपाली कलाकारहरूलाई राम्रो ‘प्लेटफर्म’ दिनुपर्छ भनेर लागिपरेका छन् । गृष्मा ब्रोडकाष्टिङ मिडिया प्रा.लि.का प्रमुख यिनै घिमिरेले सातै प्रदेशमा ‘सप्तरंग’ कार्यक्रम गरेका हुन् ।
‘सप्तरंग’ फरक कार्यक्रम यस्तो रह्यो
‘म सधैँ आफ्नो क्षेत्रमा केही फरक गरौं भनेर सोच्ने व्यक्ति’– लोकान्तरसँगको कुराकानीको शुरुवातमै गृहेन्द्रले भने, ‘मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको अवस्थामा सातै प्रदेशलाई कला, संस्कृति र खेलसँग जोड्ने हिसाबले कार्यक्रम गर्ने सोच्यौं ।’
उनले प्रत्येक प्रदेशबाट चर्चामा आएका र राष्ट्रिय कलाकारको छवि बनाएका आधारमा एक–एक कलाकार र एउटा प्रदेशको प्रतिनिधित्वमा भने खेलाडी छनोट गरिएको बताए । कलाकार पनि नौलो किसिमको कार्यक्रम गर्न उत्साहित देखिए ।
अनि शुरू भयो सातै प्रदेशका जनतामाझ एकताको सन्देश दिने किसिमको ‘सप्तरंग’ कार्यक्रम ।
कार्यक्रम निशुल्क थियो । तर खर्चको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ठूला ब्राण्डहरूले सहयोग गरेका थिए । त्यसैले बजेटको चिन्ता थिएन ।
उनलाई चिन्ता भयो त केवल कार्यक्रम कस्तो रहने हो ? दर्शकको उपस्थिति कति हुने हो ? तर कार्यक्रम हजारौं दर्शकको उपस्थितिमा भव्य भयो ।
पाँच वटा प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीले कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । प्रदेश ३ मा मेयर रेणु दाहाल र प्रदेश पाँचमा मन्त्रीले उद्घाटन गरेका थिए । नेपाल प्रहरीले साथ दिएको थियो ।
प्रत्येक शहरमा ब्याण्ड बाजाका साथ राष्ट्रिय गान बजाएर टीमको स्वागत गरिएको थियो । कार्यक्रमबारे घिमिरेले भने –‘हामीले आर्थिक रूपमा फाइदा होस् भनेर कार्यक्रम आयोजना गरेका थिएनौं । सातै प्रदेशका जनताबीच एकताको सन्देश दिन तथा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय हिसाबले ती प्रदेशलाई चिनाउन कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा हजारौं दर्शकको उपस्थिति रह्यो । हाम्रो उद्देश्यमा हामी सफल रह्यौं । कलाकारहरू पनि निकै सकारात्मक हुनुभयो ।’
कलाकारको क्रेज लोभलाग्दो
सात प्रदेशमा पुग्दा गृहेन्द्रले कलाकारको क्रेज लोभलाग्दो पाए । ‘जसरी विदेशमा कार्यक्रम गर्दा नेपाली कलाकारहरूलाई माया गर्छन् । यहाँ पनि त्यस्तै पाएँ,’ उनले भने ।
फ्यानहरूले फोटो बनाएर फ्रेमिङ गरेर कलाकारहरूलाई दिएको देखेको उनले लोकान्तरलाई बताए । उनी भन्छन्, 'कलाकारहरूको लाखौं फ्यानहरू हुनुहुँदोरहेछ ।’ उनले कलाकार र दर्शकसँगको दुरी घटाउन यस्ता किसिमका कार्यक्रमले भूमिका खेल्ने बताए ।
को हुन गृहेन्द्र ?
चितवन स्थायी घर भएका गृहेन्द्र केही वर्ष अघिसम्म इलेक्ट्रिक क्षेत्रमा थिए । विगत पाँच वर्षदेखि भने उनले गृष्मा ब्रोडकाष्टिङमार्फत सांगीतिक कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् ।
नेपाली कलाकारहरूलाई राम्रो ‘प्लेटफर्म’ दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले सांगितीक कार्यक्रम गर्दै आएको गृहेन्द्र बताउँछन् ।
सन २०१२ मा उनी एक कार्यक्रमको शिलशिलामा लण्डन पुगेका थिए । त्यहाँका कार्यक्रममा उनले गायक रामकृष्ण ढकाललाई देखे । स्मरण गर्दै गृहेन्द्र लोकान्तरसँग भन्छन्, 'कलाकारहरू यसरी विदेशसम्म आएर कार्यक्रम गर्नुभएको छ भने मैले नेपालमै उहाँहरूलाई योभन्दा राम्रो प्लेटफर्म दिनुपर्छ भन्ने सोचेँ । अनि नेपाल आएर सांगीतिक कार्यक्रम गर्न थालेँ ।’
त्यही उद्देश्यका साथ २०७० सालमा ग्रिष्मा इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि सञ्चालनमा ल्याए । २०७० सालमै ढकाल सुमधुर साँझ गरे, काठमाडौंको याक एण्ड यति होटलमा । उनी त्यसलाई नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सांगीतिक कार्यक्रमसमेत भन्छन् । त्यसयता उनी निरन्तर यस्तै सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नमा व्यस्त छन् ।
उनको हरेक वर्ष ‘साकुरा नाइट’ हुन्छ जापानमा । अहिले चौथो सिरिज चल्दैछ । दुवैमा प्रत्येक वर्ष ‘शुभयात्रा साँझ’ गर्दै आएका छन् । अष्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिकालगायतका देशमा पनि उनले कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् ।
अर्को वर्ष ‘सप्तरंग २’ गर्ने, अन्य इभेन्टलाई निरन्तरता दिने
आउँदो वर्ष पनि सातै प्रदेशमा ‘सप्तरंग २’ कार्यक्रम गर्ने गृहेन्द्रको योजना छ । ‘यसवर्षको कार्यक्रममा पाएको रेस्पोन्सले आगामी दिनमा अझ राम्रो र व्यवस्थित तरिकाले कार्यक्रम गर्ने हौसला मिलेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आगामी वर्ष ‘सप्तरंग २’ कार्यक्रम गर्छौं । प्रदेशमा अहिले गरिएका शहरभन्दा भिन्न शहरमा आयोजना गर्नेछौं ।’
उनी आउँदो वर्ष कलाकारहरूले लाइभ म्यूजिकमा प्रस्तुत हुने वातावरणका साथ कार्यक्रमको तयारी गर्ने बताउँछन् । उनले निकट भविष्यमा पञ्चेबाजा र खेलकुद सम्बन्धी ठूला कार्यक्रमहरू गर्ने तयारी गरेका छन् ।
उनको गृष्मा ब्रोडकाष्टिङले कलाकारहरूको व्यवस्थापन पनि गर्दै आएको छ ।
‘देश विदेशबाट कलाकार मागेको खण्डमा हामी भिषादेखि त्यहाँसम्म पुर्‍याउने जिम्मा लिन्छौं,’ उनी भन्छन् ।
‘ब्राण्डिङ’ गर्ने, टिभिसि बनाउने, प्रोडक्सन गर्ने, नयाँ क्षमतावान कलाकारलाई प्लेटफर्म दिने कामहरू पनि गर्दै आएको उनी बताउँछन् । कार्यक्रमहरूको म्यानेजमेन्ट, कार्यक्रमका लागि सामाग्रीको व्यवस्थालगायतका कामहरू गर्दै आएका छन् ।
‘ग्रिष्मा ब्रोडकाष्टिङले वर्षमा ५० वटा बढी सानाठूला कार्यक्रमहरू गरेकै हुन्छ । आजमात्रै काठमाडौंको छायाँ सेन्टरमा कार्यक्रम गर्नका लागि २ वर्षको सम्झौता गर्यौ, –उनले थपे ।
सांगीतिक कार्यक्रमहरू गर्दै आएका गृहेन्द्रलाई गीतसंगीत कत्तिको मन पर्छ त ? भन्छन् –‘मलाई गीत गाउन आउँदैन तर सुन्न रुचाउँछु । कार्यक्रमहरूमा पनि म अगाडि नै बसेर इन्जोय गरिरहेको हुन्छु ।’